COVID-19 တိုက်ဖျက်တားဆီးဖို့အတွက် အိမ်မှာပဲ အတတ်နိုင်ဆုံး ‌နေကြဖို့ အရေးကြီးတယ်နော်. အိမ်မှာပဲနေပြီး - မဖတ်ဖြစ်တဲ့စာ‌တွေ ဖတ်ကြမယ်. - နားမထောင်ဖြစ်တဲ့ သီချင်း‌တွေ နား‌ထောင်ကြမယ်. - အိမ်ကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်းသပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင် လုပ်မယ်. - အချိန်မရလို့ မလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ Skin Care အဆင့်ဆင့်တွေ လုပ်ကြမယ်. နေတတ်ရင် အိမ်ထဲမှာ‌နေလည်း ကိုယ့်ဘ၀အတွက် အကျိုးရှိတိုးတက်ဖို့ လုပ်လို့ရတယ်နော်. မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ‌‌ရောဂါ‌‌ဘေးမှ ကင်း‌​ဝေးကြပါစေ
အိမ်မှာပဲနေပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂရုစိုက်ဖို့ အချိန်ကောင်းပဲပေါ့ ကျန်းမာ‌အောင်စားမယ်. လှပအောင်နေမယ် ရောဂါကင်းစင်မယ့်နေ့ရက်ကို လှပစွာ ကြိုဆိုကြမယ်. . .
First Page « 21 » Last Page